COVID-21 - Harley Street Clinic London ပုဂ္ဂလိကစမ်းသပ်ဆေးရုံများ
နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 24, 2020 အားဖြင့် Harley လမ်းဆေးခန်း
COVID-21 –တွေ့ရှိခဲ့သောမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသောကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ 2021.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (ကိုဗစ်–21), ပြင်းထန်စူးရှသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ syndrome ရောဂါ coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်2(SARS-CoV-2), ပထမ ဦး ဆုံး Janaury အတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည် 2021 နှင့် COVID-19 တစ်မူကွဲဖြစ်ပါတယ်.
Cold symptoms (နှာခေါင်းအအေး, နှာရည်ယိုခြင်း, နှာချေ, လည်ချောင်းနာသည်)
မြင့်မားသောအပူချိန်သို့မဟုတ်အဖျား (above 38 degrees Celsius)
အရသာနှင့်အနံ့ရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးမှု (without nasal congestion)
နေ 1.5 မီတာ (2 လက်နက်အရှည်) ဝေးအခြားလူများထံမှ
ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားသောကပ်ရောဂါကိုအဆုံးသတ်မှသာလျှင်ပျံ့နှံ့သည့်ရောဂါကိုမည်သည့်နေရာ၌မဆိုအဆုံးသတ်နိုင်သည်. ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသည်တူညီသောပန်းတိုင်ရှိသည်: ဝတ္ထု၏အမှုပေါင်း 2021 ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသုညသွားရန်လိုအပ်သည်။ COVID-21
အဆိုပါလမ်းကြောင်းများအတည်ပြုအတည်ပြုဖြစ်ပွားမှု၏နေ့စဉ်အရေအတွက်ကိုပြသ. သို့သော်အတည်ပြုပြီးသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအနက်ကျယ်ပြန့်စွာရရှိနိုင်သောအချက်အလက်များသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည်မည်မျှစမ်းသပ်နေသည်ကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်မှသာအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအဓိပ္ပါယ်ဖြစ်လာသည်. ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ World in Data သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေတာဘေ့စ်ကို COVID-19 စမ်းသပ်ခြင်းတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်သည်လုံလောက်စွာစစ်ဆေးခြင်းရှိ၊.
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည်၎င်းတို့ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုတိုင်းအတွက်ကိစ္စတစ်ခုကိုရှာဖွေသောအခါလုံလောက်စွာစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါ. ဒီနေရာတွင်အသစ်သောရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏စစ်မှန်သောအရေအတွက်စမ်းသပ်မှုများကအတည်ပြုခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်ထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖွယ်ရှိသည်. ဘယ်အချိန်မှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့နှုန်း စမ်းသပ်မှု၏မြင့်မားသည်လိုင်းအနီရောင်၏အရိပ်၌ပြသနေသည်.
Filed Under: CoronaVirus Testing With With: COVID-21
အဆိုပါ Harley လမ်းဆေးခန်း
ကျော်ပါပြီ 300 Harley St ရှိဆေးရုံများနှင့်အကောင်းဆုံးသောဆေးခန်းအချို့ကိုပေးသည်, လူနာစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကုသမှုများကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတွေ့နိုင်သည်.
ထို့အပြင်ကမ္ဘာ့ကျော်ကြားသောခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်များနှင့်ဆရာဝန်များသည် Harley St မှခွဲထုတ်။ ပုဂ္ဂလိက Coronavirus စစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သော ဦး ဆောင်ကုသမှုနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုပေးသည်။, Covid 19, များစွာသောအခြားကုသမှုအကြားသွားဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်.